Fiparitahan’ny valan’aretina :: Mirongatra ny pesta atodintarina any Bemahatazana Tsiroanomandidy • AoRaha
Fiparitahan’ny valan’aretina Mirongatra ny pesta atodintarina any Bemahatazana Tsiroanomandidy
Mihamafy ny fihanaky ny valanaretina pesta, any amin’ny kaominina Bemahatazana Tsiroanomandidy. Tao anatin’ny herinandro mahery, olona efatra no namoy ny ainy ahiana ho noho io aretina io tany an-toerana. Olona valo ambin’ny folo hafa kosa no marary hatramin’izao.
“Misy fokontany efatra rahateo no tena hiparitahan’ny pesta any amin’ity kaominina ity, toa an’ny Tsinjoarivo, Ambalavato, Ambatofotsy Ferme ary ny ao Ambatofotsy Atsinanana. Tao amin’ity farany no nahitana an’ireo ankizy maty tamin’ity herinandro ity”, hoy io loharanom-baovao io.
“Ankizy iray no maty tamin’ny alatsinainy lasa teo . Olona roa hafa no namoy ny ainy androany (ndlr : omaly),” hoy ny avy ao amin’ny kaominina Bemahatazana Tsiroanomandidy, omaly. “ Tena nirongatra io valanaretina io any an-toerana tato anatin’ny folo andro izao”, hoy ny tompon’andraikitra iray avy ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka nanamafy ny fisian’ity tranga ity.
Miparitaka any an-toerana ny voalavo mitondra ny parasy, araka ny fanazavana voaray, ka mampihanaka vetivety ny aretina. Efa nohamafisina ny fandraisana andraikitra mba hisorohana ny fiparitahany.
Nisy ireo ekipa nidina ifotony nijery ny zava-misy. Ny famonoana an’ireo voalavo no vain-dohan-draharaha. Eo ihany koa ny fitsaboana an’ireo marary. Etsy an-danin’izany, natsangana ny komity handinika ny tokony hatao sy manao fanadihadiana manoloana an’io tranga io.
Antony nampitombo isa an’ireo namoy ny ainy ny tsy fanatonan’ny olona tobim-pahasalamana, vantany vao mitranga ny soritr’aretina, hoy ny fanampim-baovao. “ Efa tena marary ilay olona vao entin’izy ireo any amin’ny tobim-pahasalamana hany ka tara ny fitsaboana”, hoy indray ny fanampim-panazavan’ny tompon’andraikitry ny kaominina.